Cubot X50: 64 MP quad igwefoto ama na ọnụ ego | Gam akporosis
Cubot X50: 64 MP quad igwefoto smartphone na ego ọnụ
Ọ dị mkpa ịnwe igwefoto dị mma na ekwentị gị taa. Agbanyeghị na igwefoto amamịghe abụghị ọkachamara dị ka igwefoto dijitalụ, ngwaọrụ ahụ na-ewe ezigbo foto site na ntinye nke ihe karịrị otu ihe mmetụta wuru n'ime azụ nke ọnụ.
Enwere igwefoto igwefoto dị ike dị na ahịa, agbanyeghị ịhọrọ igwefoto kacha mma gụnyere ihe karịrị ịlele ụdị igwefoto. Ọ dabere na nkọwa ndị ọzọ, ọnụahịa ahụ na ihe kachasị mkpa, nke ịba uru. Ihe kacha mma maka ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị akara gị mma.
Ewebata igwefoto igwefoto ọhụụ ọhụrụ, ndị X50 nke Cubot. Ekwentị a bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-achọ ekwentị nwere nnukwu igwefoto. Ihe igwefoto dị ka ndị a: Nhazi igwefoto Quad n'azụ, gụnyere igwefoto 64MP f / 1.8, 16MP f / 2.4 igwefoto dị obosara, yana igwefoto igwe 5MP f / 2.2. Cubot X50 O nwekwara otu n'ime ihe mmetụta kachasị ike n'ihu, nke nwere oghere 32MP na ịma mma AI.
1 Mpaghara ejikere ejikere
2 Sensọ iji weghara oge kachasị mma
3 Ọrụ maka ụbọchị dum
4 Ihe mmetụta nke anọ ejikọtara ọnụ
5 Otu igwefoto selfie maka ihe niile
6 Ọnụahịa nke Cubot X50
Mpaghara ejikere ejikere
Cubot X50 nwere anya m na - abụghị naanị mkpebi dị elu, mana ọ na - arụkwa ọrụ nke ọma. Were ihe osise ọ bụla, foto eserese, na foto dị nso. Cubot X50 na - eme ka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị foto niile. Nwere ike ijide ihe ọ bụla na nkọwa nkọwa ala kachasị mma na Samsung's 64 MP lens dị elu dị elu, were nlele panoramic ya na igwefoto 16 MP dị oke obosara, ma jiri igwefoto macro Samsung dị nso-elu. 5 MP.
Cubot X50 nwere ọtụtụ ụdị foto dịgụnyere ọnọdụ eserese ma ọ bụ ọnọdụ ịma mma maka ịme foto mara mma. Ọnọdụ abalị abalị ga-enwe ike ijide ihe oyiyi na-enwu gbaa, na-enwe ike ịmepụta foto doro anya ọbụlagodi na ọnọdụ gbara ọchịchịrị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịse foto ọkachamara, ịnwere ike iji usoro Pro iji jiri aka gị setịpụ ihe ọ bụla.
Sensọ iji weghara oge kachasị mma
Na ihe mmetụta anọ dị na azụ weghaara oge ọ bụla Ọ ga - eme ka ị cheta foto ahụ na ebe dị oke ọnụ, ma ọ bụ maka njem naanị ma ọ bụ soro ndị pụrụ iche. Enwere ike ịchekwa ihe niile na nchekwa 128 GB, ebe nchekwa dị n'ime nwere ike ịchekwa ọtụtụ puku foto na vidiyo.
Ihe ndekọ ederede bụ otu n'ime ihe kachasị elu, niile maka Samsung Samsung nke bụ isi, nke ya na atọ ahụ ga-adị mkpa. Ekwentị Cubot X50 ma ewepụ foto ọma ga-edekwa na ogo dị elu na ọ bụ ultra doro anya na-enwe ike iwekota na ihe ọ bụla idaha.
The azụ isi mgbawa bụ Samsung S5KGW1, otu n'ime ihe mmetụta kachasị arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ South Korea, nke na-arụ ọrụ n'ụzọ dị ịrịba ama na imepụta ya. Performancerụ ọrụ na foto na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe kachasị mma mgbe a na-etinye ya na smartphones dị elu n'etiti njedebe.
Ọrụ maka ụbọchị dum
Ewezuga igwefoto ya anọ, Cubot X50 nwere batrị arụmọrụ dị elu, batrị ahọrọ bụ 4.500 mAh na ọ zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya ụbọchị niile. Ọ ga-anagide ihe eji eme ihe, yana ịnwe ike ijide foto na vidiyo n'ụzọ dị mfe na-enweghị iwe.
Ọ na-ekwe nkwa iji nagide n'ihu ojiji nke ngwa chọrọ izi ozi karia, igwu egwu site na ike nke MediaTek chip, wdg. Otu ụgwọ ọ ga-ezuru iji rụọ ọrụ maka ihe karịrị awa 24 ma ịghara ịgagharị na chaja, isi ihe na-eme ka ọ pụta ìhè.
Ihe mmetụta nke anọ ejikọtara ọnụ
Cubot X50 na-agbakwunye ihe mmetụta sensọ sensọ sensọ nke 0,3 MP nke anọ Na a tọọchị 1A, ọ na-aghọ ihe dị mkpa na karịa ihe niile mkpebi mgbe ọ na-abịa na-ewere n'ezie nkọ oyiyi. Ha atọ na-akwado nke anọ, ya mere, ha jikọtara nke ọma iji nweta foto nke ọtụtụ agba na nchapụta na njedebe.
Ọ bụ ihe pụtara ìhè, ebe ọ bụ na ọ na-adịkarị omimi ma na-enye ekele maka ọkụ ọkụ, ị ga-edo anya n'ọnọdụ ọ bụla, ma ọ bụ na ọkụ adịghị n'oge ahụ. 5 megapixel nnukwu foto were foto na nso nso a na-elekwasị anya nke 2,5 cm, ma e wezụga ọkwa ka ukwuu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Otu igwefoto selfie maka ihe niile
Igwefoto n'ihu na-ekwe nkwa ihe oyiyi mgbe ị na-ese foto, ma ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọ oku vidiyo, ị ga-eme ya na mkpebi Full HD. E wezụga nke ahụ, ọ na-edekwa vidiyo na oke mma ma na-eme ihe dị mkpa, site n'inwe ọnọdụ ịma mma AI maka ịbịaru nso.
Iwere foto kachasị mma ga-abụ ikuku, ekele maka ọnọdụ ya dị iche iche na megapixels 32 ya mere ka ọ bụrụ igwefoto mara mma. Nwere ike ịga site na ịdebe onyonyo ka vidiyo na obere vidiyo karịa site n'inwe ike ịgbanwe gaa na ọnọdụ ahụ site na ihuenyo n'onwe ya ma gbanwee site na azụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịse foto nke ọdịdị ala, ndị mmadụ na gburugburu ebe ndị ọzọ.
Ọnụahịa nke Cubot X50
Cubot X50 abịa na igwefoto quad 64 MP na ihe oké ọnụ price nke $ 179,99. Ọbụna ihe ịtụnanya karịa, Cubot na-enye Kupọns iji mee ka ọnụahịa ahụ rute $ 169,99 na AliExpress malite na May 17.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Cubot X50: 64 MP quad igwefoto smartphone na ego ọnụ
Nyocha Alexa, ọ bara uru ịzụta otu?
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma iji luso nrụgide ọgụ